Tycho Brahe: biography uye zviitiko zvemuongorori wenyeredzi | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 02/12/2021 10:00 | Kuongorora nyeredzi
Tichifunga nezvoupenyu hwake, tinogona kufunga nezvazvo Tycho brahe semuzivi wenyeredzi anoshamisa munhoroondo. Kubudirira kwake kwesainzi kuri pamusoro pehupenyu hweumbozha, hunoratidzwa neakawanda surreal anecdotes, uye nekuda kwehutachiona hwaGumiguru. Akapedza musi wa24, 1601. Aiva nyanzvi yenyeredzi inokosha munhoroondo.
Naizvozvo, isu tichakumikidza chinyorwa ichi kuti tikuudze iwe ese biography uye feats yeTycho Brahe.
1 Tycho Brahe biography
2 Zvakaitwa naTycho Brahe
3 Nova mudenga nezita rako
4 Magumo emuchadenga
Tycho Brahe akaberekwa muna Zvita 14, 1546 muKnudstrup, Sweden. Mwanakomana wechipangamazano chaMambo, young tycho Brahe akarererwa nababamunini vake Joergen Brahe pasi pemaitiro akaomarara. Babamunini vake vaida kuti Tycho aenderere mberi nebasa rake mukushandira mambo, saka akamupa dzidziso yakasimba muhunhu hwechiLatin, uye muna 1559, aine makore gumi nematatu, akamuendesa kuYunivhesiti yeCopenhagen, kwaakaverenga mabhuku uye bhuku. bhuku idzva.. Pashure pegore payunivhesiti, pana Nyamavhuvhu 13, 21, kuora kwezuva kwakaitika, izvo zvakasiya pfungwa huru pana Tycho muduku.
Kunyangwe akatamira kuYunivhesiti yeLeipzig kunodzidza mutemo, Brahe haana kumisa kuongorora kwake kwenyeredzi chero nguva, uye maiva mune chimwe chazvo chaakaona - panguva yekubatana kwaJupiter naSaturn - kuti vakaita zvikanganiso zvaakaita.
Izvi zvakamushungurudza zvikuru uye akafunga kudzidza nekushandura fungidziro idzi. Paaidzidzira zvemutemo paYunivhesiti yeLeipzig, Brahe akacherechedza kusangana kwemapuraneti pakati peJupiter neSaturn uye akaona kukanganisa mukufanotaura kwezvenyeredzi.
Muna 1565, pazano rasekuru vake, Brahe akadzokera kuCopenhagen. Gore rimwe chetero sekuru vake Joergen vakafa, uye Brahe, pasinei zvapo nechishoro chemhuri yake, akawana nhaka huru, iyo akashandisa nokuda kwokunzvera muruzivo rwemitumbi yomudenga. Musi waDecember 29, 1566, Brahe ane makore 20 akatanga kunetsana kunotyisa nemukuru weDanish Mandrup Parsbjög. Sezviri pachena, kunyangwe sekureva kwemunyori, Parsbjerg anga achizvidza kufanotaura kwaTycho. Vamwewo vanoti kurwa uku kunobva mukusawirirana kwemasvomhu.
Zvisinei, vazivi vemitumbi yomudenga havana kuda kupotsa kutuka uku uye zvakaguma nokurwa kwomumugwagwa. Mamwe magwaro airatidza kuti Tycho ndiye akakunda, kunyangwe rombo rake raive rakashata zvekuti kurohwa kwaakaitwa nemuvengi wake kwakatsemura chikamu chemhuno. Kubva ipapo, Tycho Brahe aifanira kupfeka prosthesis iyo, maererano naye, yakagadzirwa negoridhe nesirivha. Kunetsana nemukuru weDanish Izvo zvakaita kuti Brahe arasikirwe nechikamu chemhino dzake uye, maererano naye, aifanira kupfeka prosthesis yegoridhe nesirivha.
Zvakaitwa naTycho Brahe
Imwe yehupfumi hwasekuru vake yenyeredzi yakanga yakarongedzerwa kuwana mari yekunyanyisa. Semuyenzaniso, akasimudza mudiki anonzi Jeep, uye maererano naBrahe pachake, ane clairvoyance. Nekuda kwekusiyana kwevanhu pakati pavo, kunyangwe ushamwari hwavo hwakadzama, vaviri vacho havagone kugovera tafura panguva yekudya kwemasikati, saka Brahe anofunga kuti kana Jep akadya pasi petafura, anogona kudya naye. Imwe quirk yake kuve nemhuka yemhuka, yaakatumidza kuti Rix. Zviripachena, nondo iyi yaigara zvakanaka mumuzinda wake kuUlaniborg munzvimbo yaishandiswa naBrahe senzvimbo yekuona.
Nzvimbo yekuongorora nyeredzi yaive imba yekugara yakavakwa naMambo Frederick II weDenmark pakati pa1576 na1580. Iri pachitsuwa cheKom, Denmark. Zviri pachena kuti Brahe ane tsika yekupedza nyota nekegi yakazara nedoro. Pane kumwe kunwisa doro, mhezi yakatadza kugadzikana uye yakatyoka mutsipa payakadonha pamasitepisi.
Pamusoro pezvimwe zvese izvi, zvinonyatsozivikanwa kuti kusati kwagadzirwa teresikopu, Tycho Brahe ndiye ainyanya kuona denga. Tycho anotenda kuti kufambira mberi mune zvenyeredzi hakugone kuwanikwa kuburikidza neapo neapo kuongorora uye kuferefeta chaiko, asi kunoda kurongeka kwekutarisa uye kuyerwa, husiku husiku, uye kushandiswa kwezviridzwa zvakanyatsojeka sezvinobvira. Brahe akapikisa Nicolaus Copernicus uye akadzivirira heliocentric geocentric modhi, maererano izvo mwedzi nezuva zvinotenderera pasi, uku Mars, Mercury, Venus, Jupiter uye Saturn zvinotenderera zuva.
Pamberi pekugadzirwa kweteresikopu, Brahe ndiye mumiririri mukuru wekucherechedza denga uye haana kubvumirana nedzidziso yaNicholas Copernicus.
Nova mudenga nezita rako
Muna 1572, nyeredzi yakanga isati yamboonekwa mudenga kare yakaonekwa muboka renyeredzi reCassiopeia. Nyeredzi iyi chaizvoizvo nyeredzi itsva, uye Brahe anofarira zvikuru mairi. Akapedza rinenge gore achiongorora zvakasiyana-siyana. Pakati pavo, unogona kutarisa kuti hapana parallax (ndiko kuti, hapana mutsauko mukutaridzika kwechimiro) zvisinei kuti unotarisa kubva kupi. Kuonekwa kwenyeredzi iyi ndeimwe yezvipo zvikuru zveBrahe kumunda wekuongorora nyeredzi: kupesana mukuona kuti nyeredzi dzakagadziriswa hadzishanduki, uye maonero aya akanga achiri kushanda panguva iyoyo. Nhasi, iyi supernova inonzi zita rake.
Muna 1573, Tycho Brahe akaburitsa bhuku rake rekutanga, rairatidza kucherechedza kwake: De nova Stella, basa rake raizivikanwa zvikuru. Zvakare mugore rimwe chetero, aive nehukama nemukadzi wemurombo anonzi Kirsten, akabatana naye kunyangwe kushorwa kubva kumhuri yake ndokumubereka.
Brahe ndiye munhu wekutanga kuona nyeredzi muboka renyeredzi reCassiopeia, inova nyeredzi itsva. Kuburikidza nekucherechedza uku, akakwanisa kuramba maonero akanga achiri kushanda panguva iyo nyeredzi dzisingachinji.
Kufa kwaMambo Frederick II muna 1588 kwakareva izvozvo nyanzvi yemitumbi yomudenga yakarasikirwa namaruramiro ayo kuchitsuwa Hewen nepenjeni yaakapihwa namambo. Nokuda kwechikonzero ichi, akabva kuDenmark akagamuchirwa naMambo Rudolf II muPrague muna 1599. Rudolf II akamugadza kuva nyanzvi yemasvomhu yamambo ndokumupa nhare senzvimbo yokuona, uye akabhadhara mari yakawanda. Panguva iyoyo, Brahe akasangana nemudzidzi wake, zvakare muzivi wenyeredzi ane mukurumbira: Johannes Kepler. Kunyange zvazvo hukama hwavo hwakanga hwakaoma pakutanga, Brahe naKepler vakazopedzisira vasvika pakubatana kune zvibereko.
Musi wa13 Gumiguru 1601, Brahe akakokwa kuzoita mabiko mudare raBaron Rosenberg, mudziviriri wePrague. Panguva iyoyo, kwainzi kwakanga kusina kunaka kusimuka patafura zvokudya zvisati zvapera uye muridzi wacho akanga asati auya. Mukati memutambo, Brahe ainwa waini yakawandisa uye dundira rake rakatanga kumutsikirira, asi sezvo akanga asina utsinye, akaramba kwenguva refu kupfuura zvakataurwa. Izvi zvakaita kuti aite chirwere chaimutadzisa kuita weti zvakanaka nekuti aingokwanisa kuita weti kashoma. Pashure pemazuva 11 okutambura, upenyu hwevazivi venyeredzi hwakangoerekana hwaguma.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve biography yeTycho Brahe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Kuongorora nyeredzi » Tycho brahe
Kuziva nzira dzinonyanya kushanda dzekuchenesa mvura